फेसबुकद्वारा अष्ट्रेलियाका प्रयोगकर्तामाथि यस्ता क्रियाकलाप गर्नबाट रोक
६ फागुन, काठमाडौं । फेसबुकले अष्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताका लागि आफ्नो प्लेटफर्ममा कुनै पनि समाचार सामग्री हेर्न र सेयर गर्न रोक लगाइदिएको छ । यसका कारण अष्ट्रेलियामा मानिसहरुले सूचना हासिल गर्न समस्या भइरहेको छ । अष्ट्रेलियाका मानिसहरु जब बिहिबार बिहान उठे तब फेसबुकमा स्थानीय र विदेशी सबै समाचारका वेबसाइट बन्द थिए ।
फेसबुकले भनेको छ, ‘हामीले भारी मनले दोस्रो विकल्प छान्ने निर्णय गर्यौं ।’ अष्ट्रेलियाका प्रकाशकलाई पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा कुनै पनि लिंक सेयर गर्नबाट रोक लगाइएको छ । द नेशनल ब्रोडकास्टर, एबीसी, द सिड्नी मर्निङ हेराल्ड र द अष्ट्रेलियनका लाऔं फलोअर्स फेसबुकमा छन् । फेसबुकका अनुसार आफूले रेफरलमार्फत् अष्ट्रेलियाका प्रकाशकलाई ३१.६ करोड डलर कमाउन मद्दत गरेको थियो जबकी उसको समाचारमार्फत् निकै कम कमाई भएको छ । अष्ट्रेलियाको यो कानूनमार्फत् फेसबुक र गुगलजस्ता कम्पनी समाचार सामग्रीका लागि पैसा भुक्तानी गर्न बाध्य हुनेछन् ।
यदि यो कानून लागू हुन्छ भने टेक कम्पनीका लागि यसको अन्तरराष्ट्रिय महत्व हुनेछ । समाचारसम्म मानिसहरुको पहुँचको विषयमा पनि विभिन्न प्रकारको बहस जन्म लिन सक्छन् । तर फेसबुकले यसको प्रतिक्रियामा अष्ट्रेलियामा समाचार सामग्री आफ्नो प्लेटफर्ममा आउनबाट रोक्ने निर्णय लिएको छ । मिडियाका संस्थामा टेक कम्पनीको दबदबा बढिरहेको भन्ने विषयमा लामो समयदेखि चिन्ता जताइँदै थियो । अष्ट्रेलियामा गुगलको दबदबा छ । त्यहाँको सरकार यसलाई उपयोगी र आवश्यक साधनको रुपमा हेर्छ तर यो विषयमा कुनै प्रतिस्पर्धा छैन ।
सन् २०१८ मा अष्ट्रेलियाली सरकारको नियामकले एक अनुसन्धान गर्यो । यो अनुसन्धानमा मिडिया र विज्ञापनमा गुगल र फेसबुकको प्रभावकारी अनुसन्धान गरियो । यो अनुसन्धानमा अष्ट्रेलियाली कम्पिटिशन एण्ड कन्जुमर कमिशनले गुगल र फेसबुक स्थानीय मिडियामाथि भारी परेको पायो । यसै अनुसन्धानमा आचार संहिता बनाउने सिफारिस पनि गरियो । बीबीसी
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्नुपर्छः नेता डा. महत
हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट डा. दास सम्मानित